ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမျိုးသားရေး သြ၀ါဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမျိုးသားရေး သြ၀ါဒ
ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမျိုးသားရေး သြ၀ါဒ
Posted by ပိုင်လေး on Oct 12, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
လေ့လာမှု့ အားကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလားဘဲ
အဲ့ဒီ့ သြဝါဒကို အခုမှ သိတာ
ဝိုင်းဆဲဂျရင်လည်း ခံရအုံးမှာဘဲ :harr:
ဆရာတော့်ရဲ့ သြ၀ါဒက တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်..အခုချိန်မှာဆို ပိုတန်ဖိုးရှိတာပေါ့.
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သြ၀ါဒ က အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်ဖို့
တယ်။အရင်က ဒံပေါက်ကြိုက်လို့ သွားသွားဝယ်စားမိပါတယ်။အခုတော့ လုံးဝ(လုံးဝ)ရှောင်ကျဉ်ပါတယ်။
သံတို့၊အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းဆိုင်တွေကတော့ ဗမာဆိုင်အတော်နည်းတော့ ဟိန္ဒူတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကို
ရှာဝယ်ရသဗျို့ ။ကျုပ်ဆီက ငွေတစ်ကျပ်မှ ဒင်းတို့မရစေရအောင်နေတယ်၊ဝယ်တယ်ဗျာ။
တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကကောဝိဒ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိက မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ .. အပေါ်ကစာတွေထဲရေးထားတဲ့အတိုင်း.. . တကယ်ဟောမဟော.. ပြောမပြော.. အထောက်အထားနဲ့တကွ.. သိချင်လှပါကြောင်း..။
သဂျီးမင်းခံဗျာ နော်ကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သြဝါဒလိုထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တယ်လိုကြားသိရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ပြောကြားခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။
ဒီအပေါ်က စာကိုတော့ ဆရာတော်ကြီး ပြောတယ်လို့တော့ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အထောက်အထားနဲ့တော့ ပြနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တပည့်ရဟန်းတွေကို ကြိတ်ဆုံးမတဲ့ အနေနဲ့ ပြောခဲ့တာလို့တော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး မပြောပေမယ့် အခြားတယောက်ရဲ့ အာဘော်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေက သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဆိုသလိုပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဦးစံလှကြီးရယ် ..
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဟောခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ မဟောခဲ့ဘူးပဲဖြစ်စေ ..
ခု စကားဟာ ..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် သိထားသင့်တဲ့ စကားပဲလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ် ..
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျနော်ငယ်ငယ်ကလည်း ..
“အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ” ဆိုတဲ့ စာကို သင်ခဲ့ဖူးပါကြောင်း ..
မောင်ငယ်အံစာရေ ကိုယ့်ပို့စ်မဟုတ်ရင် ကိုစံလှကြီးကပြန်လည်ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကွယ့်
ဘက်တူမှသူကဆွေးနွေးတာကွယ့် ကိုယ့်စာမဟုတ်ရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ :harr:
ကျနော် ပြောခဲ့တာက သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောကို အဓိက ပြောချင်တာပါ။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ သူများကို တိုက်ခိုက်ဖို့ထက် ကိုယ့်တာကိုယ်လုံဖို့သာ လိုရင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နေတာက ဗေထိဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်လူတွေက ခံလိုက်ရပြီ ဆိုတာမျိုးပါ။ အကြမ်းနည်းကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်လူတွေဘက်က တခြားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်နားလည်မှု တွေမှာလဲ သူတို့ကို ယေဘူယျအားဖြင့် မယှဉ်နိုင်တာပါ။ အခု ဒီမှာတော့ သူတို့ပို့စ်ကိုလည်း ဖျက်ထားပြီးပြီမို့ ကိုယ့်ဘက်က လူတွေ သိပ်အလွန်တွေ ပြောလာရင် ကိုယ်ကလွန်တယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ။
ကျနော် သိသလောက် အဲဒီစကားကို ဆရာတော်ကြီး ပြောတာကလဲ သူတပည့်အချို့က မြန်မာဆိုင်က ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ကုလားဆိုင်က ဝယ်လာလို့လို့ ရေးထားပါတယ်။ အမှန်တော့ ဈေးကွက် စီပွားရေးအရ ကိုယ်က သူတို့ကို ဈေးနှုန်းမှာ ပြိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်။
မမလေးရွှေကြည် ခင်ဗျား ကျနော်က ကျနော်ပြန်ဖြေချင်တဲ့ လူကို ပြန်ဖြေတဲ့အကြောင်း ပြောထားပြီပါပြီ။ ကိုအံစာတုံးက ကျနော် ပြန်ဖြေမယ့် လူထဲမှာ ပါပါတယ်။ ကျုပ်က ဟောက်တဲ့ လူဟာလည်း အဲဒီလို အဟောက်ခံရအောင် အစကတည်းက မလွတ်မကင်းတွေ ရေးထားလို့ပါ။ အကြောင်းမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မလုပ်ပါဘူး။
တွေ့ဒယ်နော် မမဂျီး မရွှေကြည် …
ဦးဦးစံလှကြီးက ကျုပ်ကို သူ ပြန်ဖြေမယ့် လူတွေထဲမှာ ပါဒယ်ဒဲ့ …
ခုလို ပြောပေးတာ ကျေးဇူးပါ ..
ကျနော် ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာကလည်း ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူးလို့ …
ကျုပ်တို့ပြန်ပြောရင်ကြ မကြိုပ်ပြန်ဘူး။အဲကောင်တွေရဲ့ post ကိုပြန်ရှင်းချင်နေတာ
You don’t have permission to access /writing-guidelines on this server.
အဲဒါပြနေလို့ဗျို့ ။အခုပြန်ရှာတော့မတွေ့တော့လို့ ဘာမှဆက်မပြောတော့တာ။
အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး post တင်မလို့တောင်လုပ်ထားတာဗျ။ရေးပြီးမှ မသင့်တော်လို့
လွန်လာရင်တော့ကျုပ်ကလဲ တင်တော့မှာပါ။အဲဒီလိုဆိုရင် ကျုပ်တို့အလွန်ဖြစ်ဦးမယ်။
အဲကောင်တွေဟာ ဆက်မတင်ရင် ကျုပ်ဘက်ကလဲ ဘာမှတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပါ။
ခင်ဗျားကို ကျနော်ပို့စ်တွေမှာ ဘယ်နှစ်ခါတောင် ကျနော် ပြန်ဖြေမိသလဲ မသိဘူး။ တားလို့မရတော့လည်း ရေးပေါ့ဗျာ။ အမှန်တော့ ဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကွန်မန့်တွေ ရေးမယ်ဆိုရင်တောင် တမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဒီပို့စ်က တကယ်တော့ တိုတိုလေးရယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကျနော် ဖတ်ဖူးတာလည်း ကြာလှပြီ။ ရေးရင်လည်း များများ ရေးကြစမ်းပါဗျာ။ တခုတည်းကို ပြောရတာ အားမရဘူး။ ဒီစာတိုတိုလေးကို အခြေခံပြီး ဆဲကြဆိုကြရင် ကိုယ့်ဘက်က အလွန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဟိုဘက်က ရေးတာက အများကြီး။ သူကြီးက သူတို့ပို့စ်ကို ဖျက်လိုက်တာလား ပိတ်လိုက်တာလား ကျနော်တို့လို newbie ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ ဝင်လို့မရတာလား မသိဘူး။
ခင်ဗျားလုပ်မှပဲ ကျုပ်လဲ မန်းဂေဇက်တွင် ကျနော် သောက်မြင်ကပ်သူများစာရင်း ဆိုပြီး တခုလုပ်ပေး ရမလိုဖြစ်နေတယ်။ အလကားနေရင်း ရွှေမေတ္တာတွေဆိုပြီး အမုန်းခံရအုံးမယ်။
အဲလိုမျိုး ဆရာတော်ကြီး ဟောတယ်လို့ အင်တာနက်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်၊ နှစ်ထောင်ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းလောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အင်တာနက် ဆောင်းပါးတခုမှာ ဖတ်ရတာ။ ဆရာတော်ကြီး ငယ်စဉ်က ဆူးလေဘုရား တရားပွဲတခုမှာ ပြောတယ်ဆိုလား၊ အဲဒီတရား မဟုတ်လည်း အလားတူသဘောမျိုး ဟောခဲ့လို့ ထောက်လှမ်းရေးက သတိပေး လာလျောက်ရတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ဖမ်းချင်ဖမ်းလေကွာ မှန်တာပြောတာလို့ ပြန်ပြောလိုက်ကြောင်း ရေးထားတယ်။ ကြာခဲ့ပါပြီ သူနုစဉ်ကဆိုတော့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောပုံရတယ်။ အဲဒါကလွဲလို့တော့ အခြားနေရာတွေမှာ လူသိထင်ရှား လှုံ့ဆော်ပေးတာမျိုး မတွေ့ရပါ။ ကုလားဆိုင်တွေကို တိုက်ခိုက်တာထက် ကိုယ့်လူမျိုးတွေ စည်းပျက်ကမ်းပျက် လက်လွတ်စပယ် ဝယ်ခြမ်းသုံးစွဲနေတာကို သတိပေးဟန်တူတယ်။ တကယ်လည်း အိမ်ဆိုင် ကုန်စုံဆိုင်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝက သိပ်အမြတ်ကြီးစားတယ်၊ အချို့ပစ္စည်းများဆို ဝယ်ရင်းတန်ဖိုးရဲ့ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ၃၀၀ ခိုင်နှုန်းတောင် တင်ထားတယ်။ ပိုင်ရှင်အများစုက ဘာသာခြား၊ ဝယ်သူတွေက မြန်မာတွေဆိုတော့ အဲဒီစိတ်အခံမျိုး အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ကြတယ်။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခါ လက်ညှိုးထိုးစရာ ဖြစ်တာပေါ့နော်။ တရုတ်၊ ကုလား အဦးဆုံးခံရတာပဲ၊ ကုလားကတော့ ဘာသာခြင်းမတူ၊ သူတို့ကလည်း အစွန်းရောက် ပြုမူတွေးခေါ်ပုံကလည်း အပြစ်ရှာရလွယ်တော့ ပိုခံရပါတယ်။ ဥပမာ – ဒေသခံတွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ချမ်းသာလာပြီး ဒေသခံအမျိုးသမီးကိုယူ၊ သူတို့ဘာသာထဲ အတင်းသွပ်သွင်း၊ အများစု ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံကို ပမာမခန့်လုပ်တာမျိုးပါ။ ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် အမြင်ထပ်ပြောရင် သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ထက် ကိုယ်တာကိုယ်လုံဖို့ လက်ရှိဖြစ်ရပ်ကို ညွှန်ပြဆုံးမယ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
သဂျီးမင်း နှင့် ရွာသူားများခံဗျာ နော်ကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သြဝါဒလိုထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တယ်လိုကြားသိရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ပြောကြားခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။
အထောက်အထား အခိုင်အမာမရှိပဲ.. ဒီလို.. ဆရာတော်ကြီးနာမယ်သုံး… ဒီလိုရေး.. စာတွေလိုက်ဖြန့်နေရင်.. အဲလိုလုပ်သူတွေဟာ.. ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့.. သူ့သမိုင်းကို.. အမဲစက်စွန်းစေတယ် ယူဆပါကြောင်း..။